မော်တော်ကားတံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ မော်တော်ကားတံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
Tong Na Enterprise Co., Ltd. အရည်အသွေးမြင့်မားအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ မော်တော်ကားတံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစည်းသည့်ပို့ကုန်-oriented စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြ၏။ နိမ့်ကျမှုကြောင့်အလုပ်သမားစရိတ်နှင့်အနုပညာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏မြင့်မားသောကျွမ်းကျင်လုပ်သားအင်အား & ပြည်နယ်မှကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်တို့သည်ငွေကိုတန်ဖိုးပေးနိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုထူထေ​​ာင်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အားဖြင့်ဖြစ်စေ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်နှင့်အိမ်ပြည်ပမှာအားလုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။
ထုထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပုံစံခွက်များ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ခွန်အား,ထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများမှ အသုံးပြုကြသည်။,အခြားဒေသများသို့လည်း တင်ပို့သည်။
Plate Latch ၄.5*4 မီလီမီတာ တံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆွဲဒီဇိုင်း,လျင်မြန်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု,အရည်အသွေးမြင့်အောင်လက်မှတ်,စံနမူနာယူခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ရရှိနိုင်သည်။.ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။.
TS16949 နှင့် ISO90001 လက်မှတ်ရထားသည်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/automotive-stamping-parts.html
အကောင်းဆုံး မော်တော်ကားတံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် မော်တော်ကားတံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
သတ္တုတံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’ခိုင်မာသောထုတ်ကုန်သည် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများထံသို့ ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမက,ဒါပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ Overload Bracket 105.26*0.9 မီလီမီတာ တံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း TT40ရက် ငွေပေးချေမှု ပုံသို့မဟုတ်နမူနာအရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံဆွဲ,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,အမြန်ထုတ်လုပ်မှု,အတည်ပြုချက်အတွက် နမူနာပေးနိုင်သည်။ ပစ္စည်း 50C ISO90001 TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်တွင်ပြုလုပ်သည်။
မှိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုထည်အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ခွန်အား.ထို့အပြင် ထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်း OEM ထုတ်လုပ်သူများ အသုံးပြုရုံသာမက,ဒါပေမယ့်လည်း နိုင်ငံခြား OEM စက်ရုံတွေကို တင်ပို့ပါတယ်။. စန္ဒယားကြိုး ၇*428 မီလီမီတာ တံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ မော်တော်ကားလုပ်ငန်း ပို့ဆောင်မှု ပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာပေးနိုင်ပါသည်။.ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆွဲဒီဇိုင်း,တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေးပို့ခြင်း။,အရည်အသွေးမြင့်အောင်လက်မှတ်. ဂျပန်ပစ္စည်း ISO90001 နှင့် TS16949 နှစ်ခုလုံး Certify ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန်
အမျိုးမျိုးသော ထုထည်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မှိုများကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ခွန်အား,၎င်းကို ပြည်တွင်းရှိ မော်တော်ကားစင်တာ စက်ရုံမှ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။,၎င်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့လည်း တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။. ကဏ္ဍ ဂီယာ ၅၀*70.9 မီလီမီတာ တံဆိပ်တုံး အစိတ်အပိုင်းများ,သံမှို အစိတ်အပိုင်းများ,CNC အစိတ်အပိုင်းများ မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများ,မော်တော်ကားလုပ်ငန်း ပို့ဆောင်မှု ပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ နမူနာစမ်းသပ်မှုပေးနိုင်သည်။,ပုံဆွဲဒီဇိုင်း,မှိုတပ်ဆင်ခြင်း။,အရည်အသွေးမြင့်မားသော,တည်ငြိမ်သောပေးပို့မှု ပစ္စည်း 15C TS16949 နှင့် ISO90001 လက်မှတ် ၈)ထိုင်ဝမ်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
သံတံဆိပ်တုံး အမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။’s ခွန်အား,နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ တံဆိပ်ခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများ,Surface Treatment ED ပရိဘောဂလုပ်ငန်းအတွက် လက်ကိုင် Order အရေအတွက်အလိုက် ငွေပေးချေမှု ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ နမူနာစမ်းသပ်မှုပေးနိုင်သည်။,ပုံဆွဲဒီဇိုင်း,မှိုတပ်ဆင်ခြင်း။,တည်ငြိမ်သောပေးပို့မှု,အရည်အသွေးကောင်း ပစ္စည်းကို China Steel Taiwan မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါ။ ISO90001 TS16949 လက်မှတ်ရထားသည်။ ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန်ကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
မှိုဒီဇိုင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သံတုံးထုခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ခွန်အား,ထုတ်ကုန်များသည် ဒေသန္တရအသုံးချမှုများအတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။,ဒါပေမယ့်လည်း ဥရောပနဲ့ အမေရိကကို တင်ပို့ပါတယ်။. တံဆိပ်ခေါင်း အစိတ်အပိုင်းများ,ED Surface Treatment မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် အစိတ်အပိုင်းများ,OEM စက်ရုံများ ပို့ဆောင်မှု ပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်။,မှိုတပ်ဆင်ခြင်း။,နမူနာစမ်းသပ်မှုများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။,တည်ငြိမ်သောပေးပို့မှု,အရည်အသွေးမြင့်မားသော China Steel Taiwan မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသောပစ္စည်းများ,ပစ္စည်းအမြောက်အမြား,အရည်အသွေးစိတ်ချရတယ်။ ISO90001 TS16949 လက်မှတ်ရထားသည်။ ထိုင်ဝမ်တွင် ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ,ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။